THBP: ရခိုင်မုန်.တီ အမှတ်တရ
အေနိခါ အိမ်မှာရခိုင်မုန်.တီ ချက်တေ။ စစ်တွေက ကြွီတဲဆရာတော် စင်္ကာပူမှာ ရောက်နီလို. အရီးမမှာ မုန်.တီအာရုဏ်ဆွမ်းကပ်စော်။ မုန်.တီဟင်းရည်ကို သင်္ဘောထိုးနဲ. ညဉ့်ခါကပင် ကြိုထားရေ။ ငရုတ်ချက်ကို ငါးတိအများကြီးနဲ. အားရပါးရ တဒုံပျင်ထားရေ။ သစ်သီးကိုးမျိုး၊ ပန်းကိုးမျိုးလေ့ အဆင်သင့်။ ကိုယ်က ညဇကပင် ကကောင်းဝမ်းဆာပိုင်တွိနီဗျယ်။
ရခိုင်မုန်.တီ အကြောင်းကိုပြောကေ စစ်တွေမြို.ကို သတိရယင့်။ စစ်တွေ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှာ နီခခါက အိမ်နားမှာ စစ်တွေမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ဂြိုးချေ မုန်.တီရှိရေ။ တခါလေ့ လူပွဲရေလို.မရှိ။ လားလိုက်ကေ မိနစ် ၂၀၊ နာရီဝက်လောက်အနည်းဆုံးစောင့်ရရေ။ ဝက်ဆီဖတ်တိအများကြီးနဲ.၊ ငါးမှုန်. အဝါချေနဲ.။ ကိုယ်ကတော့ စံပြရွာအိမ်နားက မစောမေမုန်.တီလောက် မကြိုက်။ မစောမေမုန်.တီက အချေခါကပင်စားလာစော် လက်ရာက ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ. တွိပြီးသား။ ယပြီးကေ စံပြရွာနဲ. ပြည်တော်သာဖက်မှာ အထမ်းချေနဲ.လာရောင်းရေ ဝါကြီးမုန်.တီ ရှိရေ။ အနည်းစားလို.ကောင်းရေမသိ။ ဈီးကလေ့တန်ရေ။ အသုပ်တပွဲလို.ပြောလိုက်ကေ ခွက်ချေမှာ ဆား၊ အချိုမှုန်.ချေနဲ.၊ ငရုတ်သီးချက်တဖေ့ချေနဲ. ဝါကြီးလက်နဲ.နယ်လို.သုပ်ပီးလိုက်ကေ စားကောင်းသလားမမီးကေ့။ ဝါကြီးကလေ့ ခြောင်းတဟွတ်ဟွတ်နဲ. ဆိုးလို.။ အသက်က ၇၀လောက်ရှိဗျယ်။ အဂုဆိုကေ သီယောင့်မေ။ မစောမေတောင်သီလို. သမီးသည်ဆိုင် ဆက်လို.ဖွင့်နီယင့်။
ကျောက်ဖြူမှာနီခခါက ရဲစခန်းနဲ. မနီးမဝီးမှာ ကျောက်ဖြူ လက်ညှစ်မုန်.တီဆိုစော်ရှိရေ။ အဖတ်ကို လူစားဖို.လာခါမှ ဆုံနန်. ညှစ်ပီးစော် လလတ်ဆဆတ်။ အဖတ်ချေက ဖွေးလို. ဖြူလို. ပပျော့ချေ။ အသုပ်သုပ်စားကေ ပဲကြော်ချေနဲ. ကကောင်းကောင်းရေ။ ၃တန်းလောက်ခါက စားခရစော်ဆိုကေလေ့ တခါလေ့ယင်းအရသာကို မိပိုင်မတွိ။ မောင်တောမှာ မုန်.တီဆိုင် ကောင်းကောင်းကန်းကန်း စားခရပိုင်မတွိ။ အလယ်ရွာနားမှာ စားစော်မုန်.ဟင်းခါးဆိုင် တဆိုင်ရာမှတ်မိရေ။ ပဲတိအများကြီးနဲ. ပျစ်နီအောင်ချက်ထားစော်။ ၇တန်းနှစ် မောင်တောမှာ အပျိုခါဝင်ခါစ စားလိုက်တေ သောက်လိုက်တေဆိုစော် လူရုပ်မပေါက်။ ပုတ်ပိုင်သန်ရေ။ ယင်းမုန်.ဟင်းခါးကို စားလို.မနားယေ။
မြောက်ဦးမှာခါတော့ခါ တောင်ရပ်မှာ စားနီကျဆိုင်တဆိုင်ရှိရေ။ နန်းရာကုန်းနားမှာလေ့ ရဲစခန်းကမိသားစု တစု ဖွင့်ထားစော် လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တခါတလီစားရေ။ ယေဂေလေ့ ယင်းခါ မက်မက်မောမော လားစားစော် မုန်.တီဆိုင်မရှိ။ အိမ်ကလူတိကလေ့ မုန်.တီအချက်ကောင်းခါ အိမ်မှာပဲ ချက်စားဖြစ်စော်များရေ။
အဂုတော့ခါ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း မုန်.တီဆိုဂေ ကျီဗျယ်။ ကိုယ့်စော်ကို ကျပိုင် ယပိုင် ပဒကြောမပါ၊ ငါးဆုပ်မပါ၊ ငါးမှုန်.မပါ၊ ပုဇွန်ခြောက် အဆိုးအဆာနန်. ချက်ထားကေလေ့ စားလို.ရရေ။ အေနိခါတော့ ငါးနန်.ချက်ထားစော်ရာ ဒေ။ ပပိုက်နနိုက်။ မုန်.တီဖတ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အခြောက်ထုပ်။ စားကေဇက်ကြောတက် ခေါင်းကိုက် သွီးနည်းနည်းတက်စော်ကလွဲပြီးကေ အထွေအထူးမဖြစ်ပါဘူး။ ယင်းချင့်ချေကို ပြုတ်။ မုန်.ဖတ်ချေပူလို. သသွက်ချေရှိတုံး၊ ငါးငရုတ်သီးချက် ၂ဇွန်းထည့်ရေ၊ မင်းကျိုးသီး အချဉ်ချေထည့်၊ ဆား အချိုမှုန်.ချေထည့်ရေ။ ယပြီးကေ ဟင်းရည်အိုးက ငါးအနှစ်ချေတဇွန်းထည့်သိယင့်။ ယပြီးကေ သုပ်ပလိုက်တေ။ ချဉ်ငံစပ်ချေ ရဗျယ်ဆိုခါမှ အထက်က နံနံပင်ချေအုပ်ပြီးကေ ငါးဆုပ်ချေညှပ်ထည့်ပလိုက်တေ။ အူး စားလို.ကောင်းလိုက်တေဂ။ စားလီဂတ်ပါထော။ အောက်မှာ ဧည့်ခံလိုက်ယင့် ဓါတ်ပုံနန်.။း)